बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा गिरफ्तार ! आफैंले भनिन् ‘भिडियोमा देखिएको म नै हुँ’ – Dcnepal
बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा गिरफ्तार ! आफैंले भनिन् ‘भिडियोमा देखिएको म नै हुँ’
प्रकाशित : २०७६ साउन २४ गते ११:४५
काठमाडौं। पछिल्लो समय बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाको गिरफ्तारीको खबर निकै चर्चामा छ । उनलाई पक्राउ गर्दै गरेको एउटा भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । भिडियोमा सोनाक्षीलाई ल्भिर रंगको शिमर ड्रेसमा देखिन्छ । उनी कतैबाट आउँदैछिन् ।
लगत्तै उनीजस्तै कपडा लगाएकी युवतीलाई पुलिसले पक्राउ गरिरहेको देखिन्छ । पक्राउ परेकी युवतीको अनुहार नदेखिएकोले यी सोनाक्षी नै हुन् भन्ने सकिन्न तर आवाज भने सोनाक्षीकै सुनिन्छ । सुनिने आवाजमा सोनाक्षीले आफूलाई पक्राउ गरिएकोमा प्रतिवाद गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन् ‘तिमी मलाई यसरी पक्राउ गर्न सक्दैनौ । के तिमीलाई थाहा छ म को हुँ । मैले केही गरेकी छैन । तिमी मलाई कसरी गिरफ्तार गर्न सक्छौ ?’